Guryaha Iibka iyo Ijaarka gudaha Louisiana
Louisiana waa gobol ku yaal Deep South ee Koonfurta Bartamaha Mareykanka. Waa 31-aad ee ugu ballaadhnaa waana 25-ka ugu dadka badan 50-ka Mareykanka. Louisiana waxaa xadka u ah gobolka Texas dhanka galbeed, Arkansas dhanka waqooyi, Mississippi dhanka bari, iyo Gacanka Meksiko dhanka koonfureed. Qayb weyn oo ka mid ah soohdinteeda bariga waxaa laga gooyay Wabiga Mississippi. Louisiana waa gobolka kaliya ee Mareykanka ee hoostaga siyaasadaha loogu yeero xabsiyada, oo u dhigma gobollada. Caasimadda gobolka waa Baton Rouge, magaalada ugu weynna waa New Orleans. Inta badan dhulalka gobolka waxaa laga sameeyay wasakh si ay u qodaan wabiga Mississippi, taasoo ka dhigeysa biyo xireenno aad u ballaaran iyo dhul ballaaran oo biyo-xireenno xeebeed iyo qoyaan. Kuwaani waxay ka kooban yihiin biota koonfureed oo hodan ah; Tusaalooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah shimbiraha sida ibis iyo egrets. Waxa kale oo jira noocyo badan oo rahyo geed ah, iyo kalluun sida Sturgeon iyo paddlefish. Meelaha aadka u sarreeya, dabku waa geedi socod dabiici ah oo ku yaal muuqaalka waxayna soosaartay aag ballaadhan oo kayn geed dheer leh iyo saanno qoyan. Kuwani waxay taageeraan tiro aad u tiro badan oo noocyada dhirta ah, oo ay ku jiraan noocyo badan oo orchids dhul-beereed iyo dhir-carbeed. Louisiana waxay leedahay qabiilo Mareykan Mareykan ah oo aad uga badan gobollada kale ee koonfurta oo dhan, oo ay kujiraan afar kuwa federaalku aqoonsan yahay, tobanna waa gobol la aqoonsan yahay, iyo afar aan helin aqoonsi. Meelaha magaalooyinka Louisiana waxay leeyihiin dhaqamo badan, dhaxalka luqado badan, si xoog leh saameyn ugu yeeshay isku dhafka Faransiiska qarnigii 18-aad, Talyaani, Haitian, Isbaanish, Dhalad Mareykan ah, iyo dhaqamo Afrikaan ah oo loo arko inay ka yihiin Mareykanka dhexdiisa Kahor iibsashada Mareykanka ee dhulka 1803, Gobolka maanta ee Louisiana waxay labaduba ahaayeen Gumeystihii Faransiiska iyo muddo kooban Isbaanish. Intaa waxaa dheer, gumeystayaashu waxay u soo dhoofsadeen dad badan oo Afrikaan ah addoomo ahaan qarnigii 18aad. Qaar badan waxay ka yimaadeen dad isla gobol ka mid ah Galbeedka Afrika, sidaas darteedna waxay ku nuuxnuuxsadeen dhaqankooda. Jawiga Dagaalkii Sokeeye kadib, Anglo-Americans waxay kordhisay cadaadiska Anglicization, iyo 1921, Ingiriisiga ayaa in muddo ah laga dhigay luuqada kaliya ee wax lagu baro dugsiyada Louisiana kahor intaan siyaasadaha luqadaha badan lagu soo noolayn 1974. Weligeed ma dhicin luqadda rasmiga ah ee Louisiana, iyo dastuurka gobolku wuxuu qorayaa "xuquuqda dadku u leeyihiin inay ilaashadaan, koriyaan, isla markaana ay kor u qaadaan taariikhdooda, luqadooda, iyo asalkooda dhaqan" .Like gobollada kale ee gobolka Koonfurta Deep, Louisiana si joogto ah ayey u hooseysaa marka loo eego caafimaadka, waxbarashada, iyo horumarka, iyo heerar sare oo saboolnimo ah. Sanadkii 2018, Louisiana waxaa loo aqoonsaday inuu yahay gobolka ugu caafimaadqabka badan dalka, oo leh heerar sare oo ah dhimashada la xiriirta daroogada iyo isticmaalka aalkolada xad-dhaafka ah, halka ay heysato heerka ugu sareeya ee dilitaanka Mareykanka tan iyo ugu yaraan 1990-yadii.